Voasary Patty Pan Squash - Fomba Fanamboarana
afaka mividy saosy endasina ve ianao
Fangaro amin'ny dibera sôkôla 3 misy fangaro 3
kôkômbra sy voatabia voatabia miaraka amin'ny marikivy fanosotra
Voasary Patty Pan Squash
Malemy paika sy voasarimakirana, voatavo voatavo lovia no famenon-tsakafo mahafinaritra amin'ny entrée rehetra!
ny fomba fanaovana pizookie miaraka amin'ny koba mofomamy mialoha
Ny fahalavoana no fotoana tsara indrindra amin'ny taona ho an'ny vokatra voajinja voatavo! Tianay ireto squash pattypan mini ireto noho ny fahaizany mamy, tsiro ary fanamorana fiomanana.
Inona ny Patty Pan Squash?
Boribory sy madiodio miaraka amin'ny sisin'ny scalloped ity squash am-boalohany ity, mitovy amin'ny tampon'ny kilalao mihodina izy io. Mavo mavo mamirapiratra miaraka amin'ny nofo mafy orina izay mahatonga azy io ho safidy tsara amin'ny karazan-tsakafo mahandro rehetra.
Ny patasy vasy Patty dia misy tsirony (sy firafitra) mitovy amin'ny zucchini na kalesy fahavaratra .
Azo atsatsina manontolo izy io na, toy ny ao amin'io fomba fahandro io, tapaho ho cubes.
Antsoina koa hoe 'voatavo an-jaza,' tianay ny fomba fanaovan-lafaoro amin'ny lafaoro ary tsy mila voahitsy akory ilay izy. Ity fomba fahandro ity dia mampiasa anana sy tongolo lay vaovao ho an'ny tsiro malefaka sy vaovao.
HERBS FRESH Ny persily, basily, aneta, zest ny voasarimakirana ary sira vaovao dia manaova menaka ahitra matsiro.
TONGOLO GASY manao izay saika legioma natsatsika tsiro mahavariana, ary ny patasy vilany patty dia tsy misy ankanavaka amin'ny lalàna!
mandra-pahoviana no hatsatsika ovy zazakely amin'ny 350
MENAKA OLIVA Tianay ny menaka oliva amin'ny fitafiana sy ny menaka amin'ity fomba fahandro ity. Raha manana menaka baakon ianao dia ampiasao kely hanendasana fofon-tsetroka manetona!
fiovana Afafazo fromazy kely Parmesan ary apetraho ao ambanin'ilay akoho ny voatavo masaka mandra-pahatongan'ny volony sy ny volontsôkôlà ny fromazy!
Ahoana ny fomba fandrahoana patasy vono Patty Pan
Ity fomba fahandro tsotra ity dia vonona amin'ny fotoana fohy. Tsy ilaina ny manaosotra ny voatavo, sasao sy manapaka fotsiny!
Namboarina vilany paty miaraka amin'ny menaka, sira, dipoavatra ary nendasina araka ny fomba fahandro etsy ambany.
Manomàna menaka ahidrano, atsipazo voatavo voatsatsika ary aroso avy hatrany.
Raha manana ambiny ianao dia arotsaho mangatsiaka eo ambonin'ny farafaran'ny greens na manadio izany ary ampio amin'ny lasopy!
Tehirizo ao anaty fitoeram-bokatra rakotra ao anaty vata fampangatsiahana izany ary avereno atao anaty microwave. Mamelombelona ny tsiro amin'ny sira sy dipoavatra kely kokoa ary tsara ny mandeha!
Paosy mangatsiaka mangatsiatsiaka be dia be ao anaty kitapo misy zipper miaraka amin'ny daty misy marika ivelany, ary hitazona ny tsirony mandritra ny iray volana farafahakeliny.
Squash be loatra!
Squash mandritra ny fahavaratra - vonona ao anatin'ny 25 minitra
Butternut Squash Soup - manankarena sy mamy be
Vary voatavo fahavaratra - lovia mora sy matsiro
Easy Squash Casserole - resipeo kintana 5
Sauteed Zucchini - matsiro sy maro loko
Squash Butternut Voasana Voahandro Fryer - mamy sy mahavoky
Nahavita an'io Roasted Patty Pan Squash io ve ianao? Aza hadino ny mamela isa na fanehoan-kevitra etsy ambany!
Voasary Patty Pan Squash misy menaka ahitra
Fotoana fanomanana10 minitra Fotoana fandrahoan-tsakafo17 minitra Fotoana manontolo27 minitra Fanompoana6 MpanoratraHolly Nilsson Voatsatsika ahitra sy menaka voasarimakirana vaovao, lovia kely Patty Pan Squash ity, lovia mora sy matsiro! pirinty Pin
▢1 ½ kilao voatavo lapasy vilany
▢1 sotro menaka oliva
▢1 jirofo tongolo gasy toto-kena-
Menaka ahitra (tsy voatery)
▢rOA sotrokely persily vaovao
▢½ sotro basile vaovao
▢½ sotrokely aneta vaovao
▢½ sotrokely voasarimakirana
▢sira kosera sy dipoavatra mainty manandrana
potaka eo no ho eo scalloped ovy misy lasopy holatra
Afanaina amin'ny oven ny 425 ° F.
Sasao ny lapoaly patty ary alao ny ambony sy ny ambany. Hetezo ho sombin-kaikitra 1 '. Atsipazo menaka oliva, tongolo gasy sy sira ary dipoavatra hanandrana.
Miendasa 12-15 minitra na mandra-pahatongan'ny felam-boninkazo. Broil 1 minitra raha ilaina.
Raha voatoto ny voatavo dia manetsa anana manify. Kapohina miaraka amin'ny menaka oliva, zest ny voasarimakirana ary sira kely kely.
Atsipazo menaka voatavo miaraka amin'ny voatavo ary aroso mafana.
Ny ambiny dia azo tehirizina ao anaty kaontenera mahamay ao anaty vata fampangatsiahana hatramin'ny 4 andro.
Kaloria:63,Karbohidraty:5h,Proteinina:1h,Tavy:5h,Tavy voky:1h,Sodium:1levitra,Potasioma:206levitra,Fibre:1h,Sugar:3h,Vitamina A:255IU,Vitamina C:iraika amby roapololevitra,Kalsioma:22levitra,Vy:1levitra
Teny lakileResipeo voatabia voaendy tsara indrindra, voatabia Patty Pan Squash, Resipeo voatavo patty vilany voaomana, resipeo voatabia voatono Mazava ho azySakafo eo an-daniny masakaMalagasy© SpendWithPennies.com. Voaaron'ny zon'ny mpamorona ny atiny sy ny sary. Ny fizarana an'ity fomba fahandro ity dia sady amporisihina no ankasitrahana. Voarara tanteraka ny maka tahaka sy / na mametaka ny fomba fahandro feno amin'ny media sosialy. Azafady zahao eto ny politikako momba ny fampiasana sary .